Mankalaza ny Xiaomi: Mi Fan Festival 2021 ... ary Google sy Qualcomm no manatevin-daharana ny fankalazana! - SmartMe
Xiaomi dia mandefa ny Festival Mi Fan (MFF) isan-taona. Ny festival amin'ny 2021 dia hifantoka amin'ny lohahevitry ny "Discover the Opportunities". Xiaomi dia hanasa ireo mpankafy Mi mba hiady hevitra sy hizara ny zavatra niainany tamin'ny namana sy fianakaviana momba ny fiantraikan'ny vokatra Xiaomi teo amin'ny fiainany.
Manomboka anio ny fampiroboroboana manerantany miaraka amin'ny tolotra manokana mitentina $ 147 tapitrisa mahery amin'ny fantsona ofisialy ofisialy. Miasa amin'ny sehatra 70 an-tserasera sy mpiara-miombon'antoka 300 amin'ny tsena 59 i Xiaomi mba hanomezana ny mpankafy Mi manerana an'izao tontolo izao ny vokatra tena vaovao indrindra amin'ny vidiny mirary.
Google sy Qualcomm
Ny marika dia nampiasaina hiarahan'ny namorona ny afisy amin'ny IFF 2021 & mampiseho ny fiaraha-miasa akaiky eo amin'i Xiaomi sy Google ary koa eo amin'i Xiaomi sy Qualcomm.
"Xiaomi dia nametraka hatrany ny Mi Fans sy ny mpampiasa ho ivon'ny zavatra rehetra ataontsika.
Mi Fan Festival (MFF) dia tandindon'ny kolontsaintsika Mi Fan. Ity taona ity dia manamarika ny andiany faha-10 an'ny IFF ary ny taona faha-11 hatramin'ny nananganana an'i Xiaomi. Isan-taona dia mankalaza ity festival ity izahay miaraka amin'ireo mpankafy Mi, mpampiasa ary mpiara-miombon'antoka eran'izao tontolo izao hanehoana ny fankasitrahanay ny fanohanan'izy ireo - iray amin'ireo mpamily fanalahidin'ny fikarohana sy fanavaozana fanampiny Amin'ny alàlan'ny fanambaràna ny Redmi Note 10 Pro MFF Fanontana Manokana sy ny fanombohana ny andiany hetsika MFF, manantena izahay fa hampita ny fahitanay marika hitondra fanavaozana sy fomba fiaina hendry ho an'ny rehetra, ary koa ny fanoloran-tenanay ho eo hatrany ho an'ireo Mi Fans sy mpampiasa anay », Hoy ny mpitondra tenin'ny Xiaomi.
Redmi Note 10 Pro Mi Fan Festival Fanontana Manokana
Amin'ny Fetiben'ny Mi Fan amin'ity taona ity, Xiaomi dia manolotra ny Redmi Note 10 Pro MFF Fanontana Manokana miaraka amin'ny teny filamatra "Fantaro ny mety azo atao". Ny smartphone dia ho fahatsiarovana IFF tokana izay azon'ny Mi Fans mody.
Ny Redmi Note 10 Pro MFF Fanontana Manokana dia atolotra anaty fonosana miaraka amin'ny fijerin'ny habakabaka. Eo alohan'ilay boaty dia misy sarin'ireo mpanamory sambondanitra mitsivalana manerana ireo vahindanitra, misolo tena an'i Xiaomi sy Mi Fans mikaroka ireo fahafaha-manao tsy manam-petra miaraka.
Ahitana karatra karatra Mi Fan Festival misy ny sarin'ny mpanamory sambondanitra Mi Bunny ihany koa ilay boaty. Ao ambadiky ny carte postale dia misy sticker miaraka amin'ny lohahevitra Mi Fan Festival.
Ny kinova Redmi Note 10 Pro ao amin'ny Gradient Bronze miaraka amina fefy metaly voajanahary dia voafantina ho an'ny Mi Fan Festival amin'ity taona ity, ary ny kisary Mi Fan Festival 2021 manokana dia hatonta ao ambadika. Ny smartphone finday fahatsiarovana dia hamidy amina fetra voafetra manerantany.